रेखा रोइन् ! छविले शिल्पा र रेखालाई लिएर फिल्म बनाउने ! (भिडियो सहित ) - Nepali news..
रेखा रोइन् ! छविले शिल्पा र रेखालाई लिएर फिल्म बनाउने ! (भिडियो सहित )
मन छुने मंगलम, छवि ब्यानरको उत्कृष्ट फिल्म
जीवनमा पहिलो पटक फिल्म हेरेर रोएँ, हिम्तवाली नायिकाको रुपमा चिनिएकी नायिका रेखा थापाले फिल्म मंगलम हेरेपछि प्रतिक्रिया दिइन् । मलाई फिल्मको हरेक पक्षले छोयो । प्रत्येक परिवार, श्रीमान श्रीमती र प्रेमि प्रेमिकाले हेर्नुपर्ने फिल्म मंगलम बनेको छ, रेखाले भनिन् ।
मंगलम हेरेर रेखा मात्रै होइन, बिग मुभिज फिल्म हलमा उपस्थित सबै दर्शक रोए । धेरैको मन रोयो, केहीको आँखा । फिल्म सकिएको लामो समयसम्म पनि एक महिला सञ्चारकर्मी रोएर हलमै बसिन् । कस्तो मन छोयो, हुँक्क हुक्क गर्दै ती सञ्चारकर्मीले भनिन् । मैंले स्क्रिप्ट सुनाउँदै बा (निर्माता छवि ओझा) रुनु भएको थियो, मंगलमका निर्देशक नवल नेपालले भने, अहिले दर्शक रोइरहनु भएको छ । हाम्रो काममा हामी सफल भयौं जस्तो लाग्छ ।
म त आज पनि रोएँ, नायिका शिल्पा पोखरेलले सुनाइन्, अब उहाँले (रेखा थापा) तारिफ गर्नु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो । हामीले सबैको मन जित्यौं भन्ने लाग्छ । मंगलममा सशक्त अभिनय गरेर सबैको मन जितेका नायक पुष्प खड्का सबैबाट पाएको प्रशंसाले दंग छन् । कथा धेरै भेटिन्छन् । तर कथा भित्रका व्यथालाई प्रस्तुत गर्न कमै सफल हुन्छन् जस्तो लाग्छ, पुष्प भन्छन्, फिल्म हेरिरहंदा कसैले आफ्नो आँखाबाट आँसु रोक्न सक्नु भएको छैन । यही नै हाम्रो सफलता हो । नायक पृथ्वीराज प्रसाईंले पनि फिल्मबाट तारिफ पाइरहेका छन् । अभिनेत्री मिथिला शर्माले अब्बल अभिनय गरेकी छन् । अभिनेता नीर शाह आफ्नो भूमिकामा फिट छन् । दिपक शर्माको संगीत रहेको पर्ख पर्ख मायालु हिट छ । सिनेम्याटोग्राफर विष्णु कल्पितले राम्रो खिचेका छन् ।
पुरानो धारलाई छोड्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका निर्माता छविराज ओझा मंगलम बाट मल्टीप्लेक्समा पनि आफु भित्रिएको बताउँछन् । म लोफरबाट मल्टिप्लेक्समा छिर्ने कोशिस गरेको थिएँ । छिरें पनि तर सफल भइँन, फिल्म क्षेत्रमा बाघ निर्माताको रुपमा चिनिएका ओझाले भने, मंगलममा आएर म सफल भएको छु । शनिबार सबै मल्टिप्लेक्स हाउसफूल भएका छन् । यसमा म खुसी छु । हालसम्म निर्माता छविराज ओझाले बनाएका फिल्महरुमा मंगलम पहिलो नम्वरमा पर्न आउने फिल्मकर्मीको भनाई छ ।
हेर्नुहोस यो भिडियो …
विवाह भएको ३ दीन बित्यो, जोडी भन्छन मिडियाले गर्दा हनिमून पनि जान पाएन(भिडियो हेर्नुहोस)
अनमोलको नयाँ फिल्म ‘ क्याप्टेन ‘ को गीत सार्बजनीक, नायिका उपसनासंगको यो ( हेर्नुहोस भिडियो )
भाइरल अशोक दर्जी,टंक, एआर फेरी भय भाइरल: केहि घण्टामै लाखौँले हेरे ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’, ट्रेन्डिङमा हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
‘नेपाल आइडल–२’मा चर्चामा रहेका रवि ओडले तताए स्टेज, जजहरुले तारिफ गर्दा रवि भए खुशीले फुरुगं-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
रुँदै फोन आयो टन्कलाई- भिडियो हेरेपछि जताततै रुवाबासी ( भिडियो सहित )
Prevजुवा खेलिरहेको अवस्थामा हवल्दारसहित दुई प्रहरी पक्राउ
Nextरबिले भने ‘कुटपिट गर्ने दोषीलाई मात्र होईन हेर्ने रमितेलाई पनि कारबाही गर’ भिडियो सहित
हेर्नुहोस,’नेपाल आइडल’ रबिले लाईभमा आएर के भने ? आफ्ना समर्थकका लागि गाय एति मिठा गीत (भिडियो सहित)
सबिता माताको अशिर्वादले १७ बर्ष पछी यो परिवारले छोरा जन्माए, यस्तो छ बास्तबिकता- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
भारतीय कांग्रेस नेता अहमद भन्छन् : मोदी सरकारको अहंकारले भारतसँग नेपाल र नेपाली टाढिए -हेरेर शेयर गरौ।
सामाजसेवी मानिएका जितेन बान्तावाले बिदेशमा रहेका लाखौं चेलिहरुलाई यसरी रुवाएपछि- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
सरकारी ढुकुटीको एक पैसा कसैको गोजीमा जान नहुने भन्दै रविले गरे यस्तो वाचा हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
११ बर्ष देखि हराएकी आमालाई खोज्न कस्मिरबाट आएकि चेली रबिलाइ भेट्न न्युज २४ टिभीमै पुगिन…पूरा खबर हेरी शेयर गरौ।
काठमाडौँमा घर भएर पनि डेराभाडा बुझ्ने सांसदमाथि माग्ने बुढाको यस्तो गतिलो झटारो हेर्नुहोस जस्ताको तस्तै…
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार (180)
बिज्ञान प्रबिधि (99)
स्वास्थ्य/ जीबन शैली (284)
© Copyright 2016–2018 Nepali news... All rights reserved.